गण्डकी प्रदेश खेलकूद परिषद सदस्यहरुमा को को परे ? यस्तो छ जिल्ला खेलकूद अध्यक्ष र सचिवहरुको नामावली - Pokhara Sports
Home/अन्य खेलकूद/गण्डकी प्रदेश खेलकूद परिषद सदस्यहरुमा को को परे ? यस्तो छ जिल्ला खेलकूद अध्यक्ष र सचिवहरुको नामावली
गण्डकी प्रदेश खेलकूद परिषद सदस्यहरुमा को को परे ? यस्तो छ जिल्ला खेलकूद अध्यक्ष र सचिवहरुको नामावली
पोखरा स्पोर्टस ५ बैशाख २०७८, आईतवार
पोखरा स्पोर्टस । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश खेलकूद परिषद लाई पूर्णता दिए सँगै परिषदको उपाध्यक्षमा नारायण पुन मनोनित भएका छन ।
मनोनित परिषद सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको ४ वर्षको कार्यकाल रहेको छ ।
20th April 2021 at 20:18
आशा छ यो टिमले खेलकुदमा अझै धेरै योगदान पुरयाउने छ भनेर ।
समस्यामा परेकालाई मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीको राहत
राष्ट्रिय खुला स्नुकर : प्रवीन र सञ्जय विजयी